विश्वकपबाट चर्चामा आएकी क्रोएशियाकी राष्ट्रपति कोलिन्दा थिइन् खतरनाक कमान्डो, उनको तारिफ जर्ज डब्ल्यू बुश र बराक ओबामाले पनि गर्थे ! साथै उनि ८ ओटा भाषा फररर बोल्छिन् ! – Rabin's Blog
Buletin Post July 21, 2018 विश्व	0
क्रोएशियाले सन् २०१८ को फिफा विश्वकपको फानइलमा फ्रान्ससँग हारे पनि त्यहाँकी राष्ट्रपति कोलिन्दा ग्रेबर किदारोविच (५०) ले संसारको मन जितेकी छिन् ।उनी क्वार्टर फाइनल खेल हेर्न जुलाई एक तारिखमा इकोनोमी क्लासको यात्रा गरेर रुस पुगिन् र दर्शकदीर्घामा बसेर आफ्नो समूहको हौसला बढाइन् ।हारेपछि पनि उनले क्रोएशियाका कप्तानलाई अँगालो हालेर सान्त्वना दिइन् । उनको यस्तो व्यवहारको सामाजिक संजालमा निकै प्रशंसा गरियो ।विश्वकपबाट चर्चामा आएकी कोलिन्दा कुनै पनि आर्मी कमान्डो थिइन् । उनी एक उत्कृष्ट निशानेबाज पनि हुन् । हार्वर्डमा पढेकी कोलिन्डा आठ भाषाकी जानकार हुन् ।
उनको काम, अनुशासन र समर्पणको तारिफ जर्ज डब्ल्यू बुश र बराक ओबामाले पनि गरिसकेका छन् । कोलिन्दा क्रोएशियन, अंग्रेजी, स्पेनिश र डेनिस भाषा फरर बोल्छिन् । उनी जर्मन, फ्रेन्च, रुसी र इटालियन भाषामा राम्रो सँग बोल्न सक्छिन् । उनी रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्यानुएल म्याक्रोंसँग उनकै भाषामा कुरा गर्छिन् ।
गोबर ग्यासले लियो परिवारको नै ज्यान, तपी पानी सतर्क रहनुहोस
यो बर्ष किन यस्तो! फेरि अायो जहाज दुर्घटनाको यस्तो दुःखद खबर
इरानका महिलाहरूलार्इ वर्ल्ड कप हेर्न बञ्चित गरेपछि यस्तो!